Chinonzi Piyona neZvapupu zvaJehovha?
Kudzidza ari oga
Shoko rokuti “piyona” rinowanzoreva vaya vanotanga kushanda mune imwe nzvimbo vovhurira vamwe nzira yokuti vatevere. Jesu akanga akaita sapiyona, zvaakatumwa panyika kuti aite ushumiri hunowanisa upenyu uye kuvhurira vanhu nzira yokuwana ruponeso. (Mateu 20:28) Mazuva ano, vateveri vake vari kumutevedzera nokupedza nguva yakawanda seyavanogona ‘vachiita kuti vanhu vave vadzidzi.’ (Mateu 28:19, 20) Vamwe vave vachikwanisa kutora ratinoti basa roupiyona.
Piyona muparidzi wenguva yakazara. Zvapupu zvaJehovha zvose vaparidzi vemashoko akanaka. Asi vamwe vakaronga upenyu hwavo kuti vashumire semapiyona enguva dzose, vachipedzera maawa 70 pamwedzi mubasa rokuparidza. Kuti vaite izvi, vakawanda vakaderedza nguva yavanoshanda mabasa avo. Vamwe vanosarudzwa kuti vashumire semapiyona chaiwo munzvimbo dzinodiwa vazivisi voUmambo vakawanda, vachipedzera maawa 130 kana kuti anopfuura muushumiri pamwedzi. Mapiyona anogutsikana noupenyu husina twakawanda-wanda, vachivimba kuti Jehovha achavapa zvinodiwa muupenyu. (Mateu 6:31-33; 1 Timoti 6:6-8) Vaya vasingakwanisi kuita upiyona hwenguva yakazara vanogona kushumira semapiyona ebetsero pavanokwanisa kudaro, vachiwedzera basa ravo rokuparidza kusvika kumaawa 30 kana kuti 50 pamwedzi.
Kuda Mwari uye vanhu ndiko kunokurudzira piyona. Kungofanana naJesu, tinocherechedza kuti mazuva ano vanhu vari kunyanya kuda kubatsirwa mune zvokunamata. (Mako 6:34) Asi isu tine zivo inogona kuvabatsira iye zvino, ichivapa tariro yakasimba yeramangwana. Kuda muvakidzani kunokurudzira piyona kuti apedze nguva yake yakawanda nesimba kuti abatsire vamwe mune zvokunamata. (Mateu 22:39; 1 VaTesaronika 2:8) Izvi zvinoita kuti kutenda kwake kusimbe, aswedere pedyo naMwari, uye awane mufaro mukuru.—Mabasa 20:35.
Ungarondedzera sei piyona?
Chii chinokurudzira vamwe kuti vapayone nguva yakazara?